မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Shijiazhuang AoFeiTe Medical Devices Co. , Ltd.
သင်မှာယူမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဦး နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးပါ။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်သင့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးပေးပို့နိုင်ပါပြီ။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ထပ်မံဆွေးနွေးခြင်းအတွက်နှောင့်နှေးမှုရှိပါက Skype, TradeManger သို့မဟုတ် QQ သို့မဟုတ် WhatsApp သို့မဟုတ်အခြားလက်ငင်းနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မေးမြန်းချက်ကိုရရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းကိုးကားပါသည်။
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်ဆောင်သေတ္တာ၊ လိုဂို၊ ထုပ်ပိုးအိတ်နှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ သင့်အကြံဥာဏ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်နမူနာစွဲချက်ကိုပေးပြီးအတည်ပြုပြီးသောဖိုင်များပေးပို့ပြီးသောအခါနမူနာများသည် ၁-၃ ရက်အတွင်းပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နမူနာများကိုအမြန်မှတစ်ဆင့်သင့်ထံပို့မည်ဖြစ်ပြီး ၃-၅ ရက်အတွင်းရောက်ရှိပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာကိုအခမဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးဆောင်ရပါမည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့အဲဒါဟာအမှာစာအရေအတွက်နဲ့သင်မှာယူတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်အထွေထွေအမှာစာအပေါ် မူတည်၍ ရက် ၁၀-၃၀ ရက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် EXW, FOB, CFR, CIF စသည်တို့ကိုလက်ခံပါသည်။ သင့်အတွက်အသက်သာဆုံးသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် Paypal၊ TT, Wester Union၊ L / C, D / A, D / P, MoneyGram စသည်ဖြင့်လက်ခံသည်။
ကြိုတင်ငွေ ၃၀%၊ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်းမပြုမီ ODM၊ OEM အမှာစာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်ပထမ၊ အရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်းအာမခံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံကိုတရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှီယာဇွမ်တွင်တင်သည်။ သင်သည်ရှီယာဇွမ်လေဆိပ်သို့မဟုတ်ပေကျင်းလေဆိပ်သို့လေယာဉ်ဖြင့်လာနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
10.How သင်၏စက်ရုံသည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ရှိသနည်း။
၀ ယ်ယူသူများကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၀ ယ်ယူရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာတစ်ခုချင်းစီကို ၀ ယ်ယူသူထံသို့အတည်ပြုချက်ပေးရန်ပေးပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိုတင်ပို့ခြင်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏ Aofeite ၀ န်ထမ်းများသည်အရည်အသွေးကို 1pcs စစ်ဆေးပါမည်။ အရည်အသွေးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို Aofeite ရွေးချယ်?
စက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့်အတူ 1.Real စက်ရုံ
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသော ၀ န်ထမ်းများ၊ အရည်အသွေးမြင့် ၀ န်ဆောင်မှု
3.We အသေးနှင့် OEM / ODM အမိန့်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်
၄။ စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်၊ လျှော်ဆေးတံ၊ အထုပ်၊ အရောင်ကဒ်၊
CE, FDA, SGS နှင့် ISO လက်မှတ်များဖြင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး
7.Competitive စျေးနှုန်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အားလုံးရေကြောင်းနည်းလမ်းကိုလက်ခံခဲ့သည်
8.Vary ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း, LC, TT, Western Union, Money Gram နှင့် paypal
9. အချိန်ကြာမြင့်စွာအာမခံနှင့်ပြီးနောက် - ရောင်းချ serive